Atụmatụ: Idozi njehie na windo na Xfce4 | Site na Linux
Atụmatụ: Idozi njehie na windo na Xfce4
Taa n'ụtụtụ, mgbe emesịrị m usoro (Nyocha Debian) ma malitegharia ya, mgbe m banyere n ’oge m Xfce O juru m anya ịhụ na Njikwa windo (xfwm) E gosipụtaghị pointer ma panel ahụ .. WTF?
Emechaa ihichapụ, chekwaa ma weghachite ntọala O kpebisiri ike itinyeghachi ya, ebe ọ bụ na o nwere obere oge, ọ maghịkwa ngwugwu ọ wụnye nke pụrụ ịkpata ọgba aghara dị otú ahụ. Mana tupu nke a, ekpebiri m ịnọgide na-ele anya wee chọta azịza ya. Ihe niile anyị ga - eme bụ ihichapụ folda:
Amalitere m oge m na voila!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Atụmatụ: Idozi njehie na windo na Xfce4
Nke a dị oke egwu, ọ bụ etu ahụ ka ọ siri mee m na Zenwalk .. yana iche na ọbụnadị ihe edemede mere m nke mere na mgbe m bidoro sistemu ọ ga-ehichapụ ebe nzuzo
Nke a bụ ibu Debian nke na-anaghị ada ada
Nke ahụ ziri ezi, Super Debian anaghị ada ada .. 😛
¬¬ ... ee ee n'ezie ...
Arch na ihe niile ị na-akatọ ya, ọ dịghị ada ada maka "ịhụnanya nke nka", ya bụ, ọ bụrụ na sistemu ahụ adaa ọ bụ naanị n'ihi na onye iberibe na-achịkwa ya (n'ọnọdụ ụfọdụ mụ onwe m HAHA) anaghị eme ihe dịka o kwesiri.
Ebe ọ bụ na Debian na-asọpụrụ gị, na-apụ ma na-abanye na mkpọka LOL !!!
Otu ajụjụ: you na-eji Arch anụ ma ọ bụ na-anwale ebe nchekwa?
Anụ, atụkwaghị m ule
Aghọtara m na ị na-eji LXDE, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye m ụfọdụ ntụle gbasara iji na arụmọrụ? Enweela m oge na-anwa ikpebi iji ya, tụmadị nnukwu oriri, ma na-abawanye mgbe niile, nke Gnome3 na KDE. Enwere m ekele maka nkwanye ọ bụla na nke a.
Enweghị m ihe nlele ọ bụla iji lelee ihe niile mana lee foto a site na desktọọpụ m:
Igbe ahụ na eserese akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akuku aka nri bụ ihe dịka nlekota dị mfe nke na-egosi njiri akụ.
Na Firefox meghere, naanị oriri dị ntakịrị, ọ naghị ahapụ opekempe, yana YouTube kachasị ị nwere ike ịga ọkara ma ọ bụ ihe ọzọ.
Kọmputa m na-eji nwere 512mb ebule na 1.27 Ghz nke processor ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi.
Otu ihe, ọ bụ ebe gbara agba, ọ nweghị ihe nchọgharị faịlụ, ọdụ na obere ihe.
Banyere Openbox (ebe ọ bụ njikwa windo ka ọ na-eji) ọ na-eme ihe ọchị, ma anyị nwere ike ibudata isiokwu mgbe niile.
Ka o sina dị, enweghị m mmasị ịgwagbu ọtụtụ mana hey, enweghị m ike ịkpọtụrụ n'ụzọ ọ bụla, nzukọ ịntanetị ma ọ bụ ihe yiri ya ga-adị mma karịa oge maka ihe ndị a
Ejiri m OpenBox ogologo oge ma ozugbo ị nwetara ya ọsọ, ọ mara mma n'ezie. Enwere m mmasị na LXDE, mana ọ dị mfe maka uto m, ma tụkwasị m obi, agbaala m tweak ya ntakịrị. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya ma ọ bụrụ na anyị anaghị achọsi ike.
Kemgbe mgbe ị na-eji LXDE? I bughi KDEro ma emechaa? 😀
Ebe ọ bụ na KDE 4.7 pụtara, oke ahụ rapaara m wee sị "ọ gafeela"
Gịnị ka ị na-eche "araparawo"? Kọwaa ntakịrị mma ugbu a enwere m obi abụọ hehe ...
M na-aga dị ka onye na-eme nwayọ nwayọ, na-eme ka òké na pointer na-agagharị mgbe obere oge gachara
Uff enweghị echiche, ọ bụrụ na ị jiri Ubuntu ọ ga-agwa gị ihe dịka "mgbanwe distro" ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ... HAHAHAHA nah ọ na-iberibe HAHA.
Ọfọn, m gwara gị banyere njehie a, na ọ mere m ụnyaahụ 😀 na ngwa ngwa ihe ngwọta bụ ka ihichapụ onye ọrụ, ihichapụ ụlọ nke onye ọrụ m na recreate ya, ntakịrị ntugheriukwu ma ọtọ na ngwa ngwa 😀
M ga-anwale ndụmọdụ ndị a mgbe m na-agbapụ na Window Manager (xfwm) ọzọ
PS: njehie metụtara nke xfwm nyere m kwuru ihe dị ka usoro ndị a:
(xfwm4: 2996): xfwm4-CRITICAL **: Xfconf enweghị ike ibido
(xfwm4: 2996): xfwm4-NDỌ AKA NA NT ** **: Na-efu data site na faịlụ ndabara
Ọfọn, ihichapụ onye ọrụ niile bụ ihe ntakịrị anụ ọhịa hahaha. Already maraworị otu esi eme ya ọbụlagodi mfe .. 😀
Daalụ Obi ike, desktọpụ gị dị ezigbo mma, a nwara m ịnwale ya, ọ na-atọ ụtọ.
Ndewo. N'ikwu okwu banyere mmelite na LMDE, enwere m nsogbu: Enwere m Firefox 7 mana ọ meliteghị m na 8. Ekpebiri m ihichapụ ya ma degharịa ya (na-enwe olileanya na ọ ga-arụ ọrụ, doro anya), mana ihe ịtụnanya: ọ laghachiri mbipute 5! Amaghị m otú e si melite ya. Oge ikpeazụ m gbasoro nkuzi (site na blọọgụ ọzọ) na-ebudata faịlụ .tar na iji folda / opting mee ihe, m mebiri ya (ezighi ezi) wee gbanye Firefox. Ekwesịrị m ịwụnye OS niile iji dozie ahụhụ ahụ (ọ bụrụ na nke ahụ ziri ezi). Ọ bụla echiche idozi nsogbu a?
0_o Ikwesiri ịtinye OS dum iji nwee Firefox na ụdị nke kachasị ọhụrụ ya? Ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa. Dị ka ị kwuru ziri ezi, gbanwere folda ahụ / opt / firefox ya na onye na abia na tar.gz. Nke a bụ otu esi eme ya.
Ee, ọ gafeela otu ọnwa gara aga. A dum akụkọ. Daalụ. 😉
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ihe ngwọta ahụ, ihe yiri ya nọ na-eme m; windo enweghị windo aha ma ọ bụ bọtịnụ ibelata, belata, wdg. Ọ pụtakwara n'ụzọ ziri ezi n'akụkụ aka ekpe aka ekpe, na awara awara, ọ pụtaghị na nghọta m tinyere na ya. Nso ọgba aghara na ihe ngwọta dị mfe. Ekele!
Daalụ, maka anyị ndị bidoro ịkwaga na windo, onyinye ndị a na-enyere anyị aka nke ukwuu.
Zaghachi ka kurt
AKW !!!!!KWỌ !!!!!!! Daalụ, LOCOO !!
ederede akwa dijo
Saved zọpụtara m !!!! Ejim gi bia, imeela !!! 😀
Zaghachi ka lagrimaencrita
ụọ ihe ọ .ụ .ụ dijo
Ezi onyinye, etinyegoro m desktọọpụ ọzọ, n'ihi na echere m na m nwere Xfce na-enweghị atụ ...
Zaghachi ka beper
Total onyeisi ị gbochiri m iwepu ma ọ bụ ka njọ, eziokwu bụ na ị kwesịrị a na-agbata n'ọsọ haha ​​ukwu !!!
Daalụ!! Ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka m, n'ezie nnukwu.
Zaghachi Gilberto GV
Daalụ nke ukwuu. I wepụrụ ezigbo isi ọwụwa
Ihe egwu !!!!. Daalụ nke ukwuu nwoke. M na-agbasa foto. M na-eji Xubuntu 14.04 na site n'otu oge gaa na onye ọzọ mkpọchi ka jirichaa, na-ebelata na nso nso n'anya, dị ka nke ọma dị ka mmanya na elu nke windo. Apụghị m ime mkpesa n'ihi na m na-eji free software, ma mgbe ụfọdụ ị na-eche na ị na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ maka nhọrọ na-adịghị ịghasa ndụ gị maka ihe ndị a, karịsịa nkịtị ọrụ dị ka m.
Daalụ nke ukwuu, edozila nsogbu m.
Zaghachi Julían Ramírez
Ọrụ ọrụ nke ukwuu enwere m nsogbu ahụ na njiri ma ọ zuru oke 😉
O nwere ebe ihe omimi di egwu na mint Xfce.
Onweghi ihe rụrụ ọrụ n’enweghị iwu xD
Daalụ nke ukwuu, ọ rụrụ nnukwu ọrụ. My debian jessie furu efu windo windo ma ha natara na iwu ahụ na reboot :)
Daalụ na ọ rụrụ ọrụ
Enwere ekele dị ukwuu, gịnị kpatara njehie a?
Zaghachi na elagabalus
Asọmpi: Mepụta KDE 4.8 akwụkwọ ahụaja
Windows 7 ọ bụ otu KDE?